FANOHERANA NY FIFANARAHAN’NY MPITONDRA TEO ALOHA TANY CHINE : Sonia 6000 mahery efa voaangona hisakanana hikaohan’ny sambo sinoa 330 ny hazan-danomasina malagasy
Ny voalohan’ny volana oktobra teo no nalefa ity fanangonan-tsonia ity tamin’ny alalan’ny avaaz.org, ka Mitsiky M no nanao azy. 5 octobre 2018
Ny governemanta sinoa sy malagasy no handefasana azy io. Ny hanafoanana io fifanarahana io no antom-pisian’ny fanangonan-tsonia. Ny 4 oktobra dia efa mananika ny 6000 sahady ireo sonia voangona. Nahatohina ny maro ny nandrenesana fa talohan’ny nialany amin’ny maha filoham-pirenena azy, nandritra ny fihaonambe mikasika ny fiaraha-miasan’i Chine sy Afrika, natao tany Chine, dia nampanao sonia fiaraha-miasa tamin’ny orinasa sinoa iray Taihe Century Investments Developments Corporation Rajaonari-mampianina ka Hugues Ratsiferana no nanao ny sonia.
Voalaza tamin’ izany fa sambo mpanjono miisa 330 no hiasa eto Madagasikara mandritra ny 10 taona. Vola mitentina 2,7 miliara dolara kosa no tambin’ izany ka hanaovana fotodrafitrasa sy fanofanana ary fanampiana ny vahoaka hanatsara ny fiainany… Niparitaka tamin’ny tambajotra sosialy izany ka niteraka resabe teo amin’ny samy Malagasy na teo amin’ny vahiny.
Tsy misy resy lahatra amin’izany anefa ny vahoaka malagasy fa efa fantatra ny talentan’ny mpitondra malagasy ankehitriny. Izy mianakavy ihany no hanan-karena fa zara raha misy 10% no tena ho tonga amin’ny vahoaka, ankoatra ny kolikoly. Tsy vitan’izany fa seha-pihariana maro no ho potika, indrindra ny toekaren’ireo mpanjono madinika maro mivelona amin’ny ranomasina. Hatreto, hatramin’ny minisitra Augustin Andriamananoro izay tompon’andraikitra voalohany amin’ny jono sy ny harena an-dranomasina eto Madagasikara dia tamin’ ny gazety ihany koa no nahafantarany ny fisian’ izany fifanarahana izany.
Ny fanontaniana mipetraka dia hoe afaka manao sonia fifanarahana izay mamatotra ny firenena toy izany ve i Hugues Ratsiferana, amin’ny alalan’ny AMDP (Agence malagasy de développement économique et de promotion d’entreprises) ? Ary amin’ny maha inona azy ? Nahoana no tsy nanontaniana ny hevitry ny teknisianina amin’ny jono malagasy sy ny minisitra tompon’ andraikitra ? Hanao ahoana ny ho avin’ireo Malagasy maro miaina amin’ny ranomasina ? Ireo daholo ny fanontaniana mipetraka sy manitikitika ny sain’ny maro.
Tsy ampy ny fanaraha-maso ny efa misy
Tsapa mantsy fa efa miha mihena ny harena an-dranomasina eto amintsika. Anisany mahatonga izany ny tsy fisian’ny politika fitantanana maharitra ka mandeha foana ny jono, indrindra ny trondro mandritra ny fotoam-panatodizany. Ny makamba sy ny drakaka aloha izao no efa misy fotoana mampijanona mandritra ny volana maromaro fitrandrahana azy. Tsy voasakana anefa ireo mpanjono madinika sy nentim-paharazana ka dia manjono hatrany na dia mihidy aza ny jono. Tsy mbola mafy rahateo ny sazy, fa alain’ny sampan-draharaha mpanara-maso ny jono fotsiny ny hazandrano azo dia izay. Noho izany dia tsy mahafay ny tsy manara-dalàna ny fepetra apetraka, satria raha tsy tratra izy dia mahazo vola hatrany. Ny vokany anefa dia mihena ny hazandrano, ka mihasarotra hatrany ny fahazoana azy. Efa maro rahateo ireo orinasa misehatra eo amin’ny tontolon’ny jono eto Madagasikara. Maro amin’izy ireo no tsy manaja ny lalàna na ny toerana tokony hanjonoana na koa ny fitaovana ampiasaina ka mikaoka hatramin’ny fanambanin’ny ranomasina. Misy ihany koa ny mampiasa harato tsy manara-dalàna. Ary indrindra, raha tokony any amin’ny 6 ‘miles’ izy ireo vao manjono dia misy ny manakaiky ny sisin-dranomasina izay natao ho an’ireo mpanjono nentim-paharazana. Tsy ampy ny fanaraha-maso satria tsy manana mpiambina sisin-dranomasina na garde côtes isika Malagasy na dia voahodidin’ny ranomasina aza ny sisintanintsika. Tsy manana lakana haingam-pandeha afaka manenjika ireo sambo ihany koa ary indrindra tsy misy hoenti-manana hanaovana izany. Sambo miisa telo no mba nananan’ny mpanara-maso ny jono dia ny Tendro maso, Telo nify ary Antsantsa.
Nefa dia namidin’ny fanjakana koa ny Tendro maso izay lehibe indrindra amin’ ireo sambo ireo satria nolazaina fa efa antitra, satria namboarina tamin’ny taona 1958 tany. Namidy nefa tsy nosoloina akory. Ankoatra izay dia mbola ny Vondrona eropeanina ihany koa no nantenaina hamatsy vola ny fanaraha-maso ny jono, hany ka tsy sahin’izy ireo arahi-maso ny sambon’ny CEE miasa aty amin’ny fari-dranomasin’ i Madagasikara. Efa ho 10 taona izay no tsy hita nanao ny asany aty amin’ny fari-dranomasin’i Mahajanga intsony ireo sambon’ny mpanara-maso ny jono ireo.